The Most Scenic Dzidzisai Trips In Switzerland In Summer | Save A Train
musha > Travel Europe > The Most Scenic Dzidzisai Trips In Switzerland In Summer
The Most Scenic Dzidzisai Trips In Switzerland In Summer
Zvinogona kunzi Switzerland chinonyanya kuzivikanwa nokuda kwayo chando twi uye zvinonaka chokoreti, asi kune zvakawanda yakaisvonaka kunyika pane zvinoonekwa neziso. Chitima Trips muSwitzerland ndeimwe yenzira kunakidzwa yakanaka mumaruwa. Ita nguva yako vakapedza ikoko. The kwoushamwari ekunze anoita wako rwendo kunyange kunakidza. Iyi mimwe kupfuura yevedza Dzidzisai Trips kuSwitzerland muna chirimo.
The Glacier Express pakati St. Moritz uye Zermatt imwe Train Trips kuSwitzerland
Zvichida ichi ndicho chimwe chezvinhu zvakanakisisa inozivikanwa neSwiss yevedza nezvitima uye chikonzero chakanaka. The chitima nzendo pakati St. Moritz uye Zermatt Via Chur, Andermatt, uye Brig. Chinhu zvizere zuva chitima rwendo asi vanhu vakawanda vasarudze kuzviita pamusoro pezvizuva. Vanopedza nguva panguva dzakasiyana-siyana dzokugara munzira. Summer ndeimwe yenzvimbo dzakakurumbira nguva kuenda uye pane kuti vana nzendo pazuva pamusoro iyi. zvikuru yevedza chikamu izvi chitima rwendo ndicho chikamu pakati Chur uye St. Moritz. Pano uchateerera kufamba pamusoro kazhinji-mifananidzo Landwasser viaduct unoguma ari tanera.
The Golden Pass Line kuGeneva
No Train Trips muSwitzerland kwaizova kwakakwana pasina chokufambisa pamusoro Golden Pass Line. The chitima anobva Lake Lucerne kuGeneva kana kubva Zurich kuGeneva vaya vane shoma nguva maoko avo. Mumwe rwendo anongova kuyevedza sezvo dzimwe. Pane maonero vasere kuSwitzerland nakisa zvitema madhamu, pamusoro pemipata matatu gomo uye pakati maviri mutauro munzvimbo (French uye chiGerman Switzerland). Kutora rwendo yose zvinoda nokuchinja nezvitima kanoverengeka asi zvinotyisa zviri zviripo. Vakatakurwa vanofanira kuchengetera chigaro yavo pane zvimwe zvitima uye motokari. Iva nechokwadi kuti ronga mberi nokuti rwendo urwu!
Kunyange zvingava yechirimo muSwitzerland iwe vakasungwa kuona avo yakakurumbira nenhongonya chena gore rose uye kana chando nemakomo zvaunoda kudarika Jungfraujoch yemapurisa inzvimbo unofanira kushanyira. Ndicho soro panhepfenyuro Europe uye zvinogona nomuongorori kunokwira chitima kubva pieni Scheidegg. Maonero kubva chitima nzendo muSwitzerland chinhu chinokosha uye rwendo kuti pane wakakwana vakai-kusvikira chikuru pakuguma. rwendo urwu ndechimwe munhu anyorewo.
Kune vakawanda incredible chitima nzendo kutora asi izvi pakati pamusoro kupfuura yevedza Dzidzisai Trips kuSwitzerland muna kuuya Summer. Chii nani nzira nakidzwa pamushana uye kutora zvinoshamisa munyika ino yakanaka kupfuura nechitima? Hatigoni funga zvikuru chakakwana nzira kuona Switzerland saka ndiponese vamwe mari uye chitima kufamba.
Mugshot chitima tikiti nekuti European kufamba? Wadii kutora 3 maminitsi yedu yepaIndaneti kuwana yakachipa pashiri chitima nzendo muSwitzerland nokuda kwenyu chitima nzendo. Login yedu yepaIndaneti zvino bhuku inodzidzisa matikiti.
Unoda embed yedu Blog pambiru uri paIndaneti, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fthe-most-scenic-train-trips-in-switzerland-in-summer%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
SwissAlps Train Travel chitima rwendo travelswitzerland